सूचना/प्रविधि Archives - Recent Nepal News
काठमाडौं । ‘अवैध’ रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन एक गतेदेखि नचल्ने भएका छन् । यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रूपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरू त्रसित छन् । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनुपर्दैन । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमे...
स्टार्ट अप कम्पनी ‘डकसुमो’ फरक पहिचान बनाउदैं
काठमाडौं । डकसुमो डकुमेन्ट एल नामक स्टार्ट अपकम्पनीले Rupeek, Open, Khatabook, YAP जस्ता अन्य थुप्रै लोकप्रिय फिनटेक कम्पनीमा लगानी गर्ने Better capital नामक सुरुवाती स्टेज भेन्चर फर्मबाट बीज कोष उठाएको छ । यस राउण्डमा विश्वव्यापी विकासमा बढुवा ल्याउने TechStars र Barclays जस्ता कम्पनीले पनि सहभागिता जनाएका थिए जसले गर्दा यस कम्पनीले कुल २ लाख २० हजार अमेरिकी डलर रकम उठाउन सक्यो । यस स्टा...
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ सिम कार्ड खरिद गर्दा थप सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिला नयाँ जीएसएमरसीडीएमए प्रिपेड सिमकार्डमा ५० रुपैयाँको ब्यालेन्स उपलब्ध हुने गरेकोमा अब त्यही मूल्यमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुने भएको हो । आउँदो पुस १६ अर्थात जनवरी १ (अंग्रेजी नयाँ वर्ष) देखि सिम कार्डमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुने भएको हो । नयाँ सिमकार्डमा १० रुपैयाँ ब्यालेन्सको रुपमा उपलब...
नोकियाले भित्र्यायो नयाँ ‘नोकिया २.३’ स्मार्टफोन, मूल्य कति ?
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध स्मार्टफोन कम्पनी नोकियाले ‘नोकिया २.३’ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नोकियाले आफ्नो क्षेत्र विस्तारका लागि टेलिटक प्रा. लि. सँग साझेदारी गरी उक्त मोबाइल फोन नेपालमा भित्र्याएको हाे । टेलिटक प्रा. लि. नेपालमा बिगत दशकदेखि बिभिन्न ब्राण्डका मोबाइलहरु विक्री तथा वितरण प्रबद्र्धन लागि प्रख्यात छ । नोकिया २.३ इन्ट्री लेभलको स्मार्टफोन हो जस्मा ६.२ एच डी प्लस स...
ठगीको नयाँ तरिका,फेसबुक, भाइबर चलाउनुहुन्छ ? सावधान !
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने र अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो । पछिल्लो समय ‘इमेल फिसिङ’ मार्फत करोडौँ रुपैयाँ ठगी हुने गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखामा मासिक १० देखि १५ उजुरी ‘इमेल फिसिङ’को पर्ने गरेको छ । ...
नेपाल टेलिकमको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना, फोरजी विस्तार आज
काठमाडौँ, असोज १५- नेपाल टेलिकमको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा रहेको फोरजी सेवा विस्तारको कामले बुधबार ठोस नतिजा हासिल गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बेलुका ५ बजे मुख्यमन्त्रीसहित विभिन्न नगरका मेयरसँग एकै पटक भिडियो कल गरेर फोरजी विस्तारको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कम्पनीको व्यवसायको अधिकतम हिस्सा थ्रीजीले ओगटेको सन्दर्भमा विस्तार परियोजनासँगै विश्वभर प...
सामसङ ग्यालेक्सी ए१०एस नेपाली बजारमा,के-के छ विशेषता ?
काठमाडौं - नेपालको सबैभन्दा ठूलो कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स एवं स्मार्ट फोन ब्राण्ड, सामसङले हालै ग्यालेक्सी ए १० एस नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । यो ग्यालेक्सी ए सिरिजको सबैभन्दा नयाँ स्मार्टफोन हो । ग्यालेक्सी ए स्मार्टफोनको विशेषताको लागि नवीन आविष्कार गरेको छ । ग्यालेक्सी ए परिवारको सबैभन्दा नयाँ सदस्यका रुपमा ग्यालेक्सी ए१०एस स्मार्टफोन आएको छ, जुन प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई अझ बढी समुन्नत बनाउन...
भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा परेको भूकम्पपीडितले कात्तिक मसान्तभित्र घर निर्माण शुरु नगरे अनुदान नपाउने
भक्तपुर,भदौं २६ - राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा परेको भूकम्पपीडितले आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र घर निर्माण शुरु नगरे अनुदान नदिइने बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, भक्तपुरले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले कात्तिक मसान्तभित्र घरको जग पनि न...
आईफोन-११ तीनवटा भर्सन एकै पटक सार्वजनिक,यस्तो छ मूल्य र विशेषता
एजेन्सी -एप्पलले ३ आईफोन लन्च गरेको छ । यसरी लन्च भएका ३ आईफोनमा आईफोन ११, आईफोन ११ प्रो र आईफोन ११ प्रो म्याक्स रहेका छन् । लन्चिङको समयमा एप्पलका सीईओ टीम कुकले आईफोन एक्सार २०१८ को बेस्ट सेलिङ स्मार्टफोन भएको बताएका छन् । नेपालमा एप्पल आईफोन ११ को ६४ जीबी स्टोरेज भरियन्टको मूल्य १ लाख ३ हजार ८४० रुपैयाँ पर्छ । भारतमा यो फोन सेप्टेम्बर २७ देखि उपलव्ध हुनेछ । यो फोन ६४ जीबीका अतिरिक्त १२८ जीबी तथ...
एप्पलले ल्यायो ‘एप्पल कार्ड’,यसरी लिनुहोस् ‘कार्ड’ पैसा लाग्दैन्
काठमाडौं – एप्पलले ‘एप्पल कार्ड’ सेवा सुरु गरेको छ। आफ्ना ग्राहकको वित्तीय सुविधा सहित सरल जीवनको लागि बुधबारदेखि कम्पनीले यो सेवा सुरु गरेको हो। यो सेवा अमेरिकामा भित्र मात्रै लागु हुने छ । एप्पलको यो कार्ड प्रयोग गर्न चाहने जो सुकैले आइफोनको वालेट एप वा एप्पलको वेवसाइट बाट कार्डको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कार्ड लिन कुनै शुल्क लाग्ने छैन। एप्पलका अनुसार प्रयोगकर्ताले एप्पलको कार्ड मात्र प्रयो...